Siday wax u dhaceen weerarka Jaamacadda Garissa: 147 ayaa dhimatay - BBC News Somali
Siday wax u dhaceen weerarka Jaamacadda Garissa: 147 ayaa dhimatay
2 Abriil 2015
Dabley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weli ku jira gudaha Jaamacadda Garissa ee ay weerarka ku qaadeen arrornimadii saakay. Halkan kala soco siday wax u dhaceen.
21:30 (SAB) Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 4-tii dableyda ahayd ee weerarka soo qaadday lagu dilay howlgalka ay dowladda ku qaadday Jaamacadda Garissa ee dableydu weerarka ku soo qaadeen arroortii saakay.
21:26 (SAB): Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 147 ruux lagu dilay weerarka, 80 ayaa lagu dhaawacay, 3 askerina waa la dilay
Image caption Dowladda ayaa sheegtay in ugu yaraan 147 ruux la dilay
19:46 (SAB) Dowladda ayaa bandow soconaya (0630pm-0630am) ku soo rogtay magaalooyinka Garissa, Mandera, Wajir iyo Tana River.
19:25 (SAB): Wasaaradda waxaa kale oo ay sheegtay in 4 ka mid ah dableydii weerarka soo qaadday ay halkaasi ku dileen.
19:17 (SAB): Wasaaradda Amniga Gudaha Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 70 ruux ay ku dhinteen weerarka Jaamacadda Garissa.
Image caption Dadka dhaawaca halista ah ayaa Nairobi loo soo duuliyay
18:53 (SAB): Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dishay labo ka mid ah dableyda weerarka soo qaadday.
Image caption Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidan xoog leh ay geysay goobta weerarka uu ka dhacay
17:56 (SAB): Dowladda Kenya ayaa haatan kordhisay lacagta ay duldhigtay Maxamad Kuno Gacmadheere, waxay ka dhigtay 215,000 oo doollar.
17:30 (SAB): Ardey ka soo baxsaday Jaamacadda weerarka uu ka dhacay ayaa sheegay in dableyda ay dadka weydiinayeen diintooda, "kaddibna waxay tooganayeen dadka Masiixiyiinta ah".
16:53 (SAB) Dowladda Kenya ayaa horey u sheegtay inay ku raadjoogto Gacmadheere iyo Cali Imaan, oo ay sheegtay inay ka dambeeyaan weerarrada Kenya.
16:47 (SAB)Wasiirka Joseph Nkaissery waxaa uu sheegay inay dowladdiisu bixin doonto 53,000 oo doollar oo la siin doono ninkii keeno warar la xiriira Gacmadheere.
16:45 (SAB): Wasiirka amniga gudaha Kenya ayaa sheegay inay ku raadjoogaan Maxamad Kuno, oo ay sheegeen in lagu naaneyso Gacmadheere. Wasiirku waxaa uu leeyahay isaga ayaa ka dambeeyay abaabulidda weerarka Jaamacadda Garissa.
15:53 (SAB): Wasiirka amniga gudaha Kenya ayaa sheegay inay soo afjareen
Image caption Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurta gurmadka deg dega ay ka soo baxayaan goobta weerarka
15:50 (SAB): Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay weerarka uu soo gudbin doono wasiirka amniga gudaha.
15:47 (SAB): Uhuru Kenyatta ayaa sheegeya in dowladdiisu ay ciidan geysay goobta weerarka.
15:43 (SAB): Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu bixiyay amar ah in la dedejiyo tababarka 10,000 oo askeri oo hor leh.
15:42 (SAB): Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeedinaya shacabka Kenya.
15:39 (SAB) Dad sheegay inay goobjoog u ahaayeen weerarka:
15:10 (SAB) Bashkas Jugsoodhacay oo Garissa joogo waxaa uu leeyahay, tirada dhimashada waxay gaartay 17 ruux.
14:37 (SAB): Wasaaradda amniga gudaha Kenya ayaa sheegtay in dablayda ay haatan ku soo hareen hal dhismo oo ka mid ah kuwa ay ardaydu degganaayeen.
14:32 (SAB): Wasaaradda amniga gudaha ee Kenya aya sheegtay inay dadka ka soo saareen saddex ka mid ah afarta dhismo ee ardayda ku sugnaayeen.
Image caption Halkan ka daawo khariiddada Jaamacadda uu weerarka ka socda ee Garissa
14:15 (SAB): Wasiirka amniga gudaha Kenya ayaa sheegay in la xiray mid ka mid dableyda weerarka geysatay isagoo isku dayayay inuu goobta Jaamacadda ka baxsado.
13:37 (SAB): Ugu yaraan 500 oo ruux oo u badan ardey ayaan la ogeyn halka ay jiraan, iyadoo Al-Shabaab sheegtay inay dad badan afduub ugu haystaan gudaha Jaamacadda Garissa.
13:33 (SAB): Dowladd ayaa sheegtay in mMadaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu goor dhaw khudbad u soo jeedin doono shacabka Kenya.
13:30 (SAB): Dhimashada ayaa haatan la xaqiijiyay inay gaartay 15 ruux, iyadoo dhaawaca uu kor u dhaafaya 60.
Image caption Ururka Al-Shabaab ayaa horey weerarro uga gaystay gobolka woqooyi-bari Kenya
13:27 (SAB): Wasiirka Amniga Gudaha Kenya, Joseph Nkaissery, oo ku sugan Garissa, ayaa la filayaa inuu goor dhaw warbaahinta la hadlo.
13:15 (SAB): Madaxweynaha Kenya ayaa maalin ka hor sheegay in ammaanka dalka la sugay, waxaa uu ku gacanseyray digniin weerar oo ay soo saartay safaaradda Britain
13:08 (SAB): Dowladda Kenya ayaa dadka ugu baaqday inay is dejiyaan, waxay sheegeen inay warbaahinta la hadli doonaan daqiiqada yar kaddib.
13:05 (SAB): Goobjooge ayaa sheegay in rasaas weli laga maqlayo Jaamacadda Garissa ee ururka Al-Shabaab weerarka ku qaadeen.
13:00 (SAB): Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in Jaamacadda Garissa ay ku haystaan masixiyiin, oo ay sii daayeen dadkii Muslinka ahaa ee ay goobta ugu tageen.
Image caption Ardeyda qaar ayaa goobta weerarka Jaamacadda Garissa ka soo baxsaday iyagoo qaarka hore qaawan.
12:49 (SAB): Wasiirka amniga gudaha Kenya, taliyaha boliiska iyo dhamaan mas'uuliyiinta amniga ayaa haatan ku sugan Garissa, si ay u kormeeraan howlgalka ay ciidammada Kenya ka wadaan goobta weerarka Jaamacadda.
12:47 (SAB): Wargeyska The Nation ayaa sheegay in 15 ruux ay ku dhinteen weerarka Jaamacadda, dableyda ayaa weli ku sugan gudaha Jaamacadda.
12:37 (SAB): Hay'adda Laanqeyrta Cas ee Kenya ayaa ku baaqdey in dadku dhiig ku deeqaan, waxay sheegeen in dhaawacyada qaarkood ay halis yihiin.
12:36 (SAB): Ururka Laanqerta Cas ee Kenya ayaa sheegay in qasaaruhu gaaraya 65 ruux oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac
Image caption Iskuullada Garissa ayaan weli furmin maanta, iyadoo ardeydan ay u daawasho tageen goobta weerarka.
12:25 (SBA): Sheekh Cali Maxamuud Raage, Cali Dheere, ayaa sheegay in dadku ay kala saareen, oo ilaa haatan ay si deeyeen 15 ruux oo Muslin ah.
12:21 (SBA): Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in dableydii weerarka qaadday ay "nabad qabaan" oo ay ku sugan yihiin gudaha Jaamacadda
12:16 (SBA): Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ka socda Jaamacadda Garissa
Image caption Ardeyda qaar ayaa ka soo baxsaday gudaha jaamacadda uu weerarka ka socda.
Image caption Boliiska Kenya ayaa hareereeray goobta weerarka ka dhacay
12:01(SAB): Dabley hubaysan ayaa weli ku jira gudaha Jaamacadda Garissa ee ay weerarka ku qaadeen arrornimadii saakay, ugu yaraan lix ruux ayaa dhimatay ilaa haatan.